Ahoana ny fampiasana ny "Disney Cruise Line Navigator App"
Maka Disney Cruise? Download ny App Navigator alohan'ny handehananao
Disney Cruise Line Navigator App: Afaka Free! Fa ny Fab! Mahafinaritra!
Disney Cruise Line Navigator App. Suzanne Rowan Kelleher
Maka Disney Cruise ? Ankehitriny dia misy fomba roa hijanonana eo ambonin'ny zavatra mitranga ao anatin'ilay sambo. Isan'andro amin'ny fitsangatsanganan-tsainao, ny taratasy hoe "Personal Navigator" dia manome anao fananganana tohodrano amin'ny hetsika manokana sy ny antoko, ny tanora ary ny asan'ny olon-dehibe, ny fisehoan-javatra ary ny fialamboly.
Na azonao atao ny mamoy an'io taratasy io ary manararaotra ny dia ataonao amin'ny smartphone miaraka amin'ny fanampian'ny Disney Cruise Line Navigator App . Azonao maimaim-poana ho an'ny iPhone sy Android izany, ary fomba tsara handaminana ny fotoanao sy hahazoana antoka fa tsy manadino zavatra ianao. Ny tena tsara indrindra, ny rehetra ao amin'ny fianakavianao dia afaka mandefa ilay rindrambaiko ka mametraka ny traikefany manokana amin'ny sambo.
Tao anatin'ny sambo vao haingana tao amin'ny Disney Dream , dia hitako foana ny fampiasana ny app handamina ny fotoako sy ny fisafidianana ny asa ao amin'ny sambo sy Castaway Cay , hahitako ny toerana misy ireo karazan-tsarimihetsika Disney, ary na dia ny fanararaotam-peo amin'ny menaka fisakafoanana aza.
Ity no fomba hanombohana:
Ampidiro ny app amin'ny Apple App Store ho an'ny iPhone na Google Play for Android.
Rehefa tafiditra ao anaty findainao ianao dia midira ao amin'ny fiaramanidina Airplane . Fampihetseham-pahendrena izany na dia tsy mampiasa ny app aza ianao, satria hamafa ny angon-drakitrao izy mba tsy hikitikitika anao amin'ny volavolan-dalàna tsy misy vidiny rehefa miverina amin'ny dianao ianao.
Mifandray amin'ny Wi-fi amin'ny tambajotra DCL-GUEST .
Ankehitriny dia vonona ny handeha ianao. Ny fampiharana dia maimaim-poana ary miasa ao amin'ny sambo fiaramanidina Disney.
Mitandrema andro fiaramanidina ho an'ny Disney Cruise
Ny andiam-panodinan'ny "Personal Navigator" dia manome anao ny fandaharam-potoana iray manontolo andro, saingy tsy mbola azo atao izany raha tsy amin'ny alina. Hahita ny "Navigational Personal" ny andro manaraka ao amin'ny trano fandefasana anao rehefa miverina ny hariva aorian'ny sakafo hariva.
Ny tombony iray amin'ny app Navigator dia ny manome anao ny mijery ny zava-nitranga rehetra nandritra ny dia iray manontolo, mba hahafahanao mitsambikina any aoriana ary hijery izay hitranga. Koa satria manome anao ny sarin'ny safidy rehetra ataonao - horonantsary iray izay hivezivezy imbetsaka ao anatin'ny dia an-dasy, ohatra - dia mahafinaritra ho an'ireo izay te hianatra mialoha.
Olona iray ao amin'ny fianakavianao dia tsy mampiasa smartphone? Avelao izy ireo hanana ny boky "Personal Navigator" ho an'ny tenany manokana.
Maka sary lehibe momba ny Cruise Disney anao
Ny fampiharana dia mora ampiasaina ary tena mahaliana. Ny sakafo maina dia ahafahanao mahita haingana ny zavatra tadiavinao.
Ataovy izay hitranga mandritra ny andro
Mora ny mahita ireo hetsika rehetra mitranga ao anatin'ilay sambo - anisan'izany ny fotoana hanombohany sy ny toerana handehanany-ary koa ny fandaharam-potoana voalamina mandritra ny andro ao Castaway Cay . Azonao atao ny mamindra ny asa atao amin'ny sokajin-taona, noho izany, ny ankizy sy ny zatovo ary ny zatovo dia afaka mahazo antoka fa tsy manadino ny hetsika mahafinaritra ao amin'ny Oceaneer Lab, Oceaneer Club, Edge, na Vibe.
Rehefa mahita hetsika na zava-mitranga tianao ianao dia mifidiana tsotra fotsiny ny fonosana ary ho voavonjy amin'ny fandaharam-potoanao manokana. Ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny smartphone dia afaka mifidy ny asa aman-draharahany tsy manao ny asany ary mitazona ny fandaharam-potoanany manokana.
Mifampiresaha amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana
Ny tabilao eo amin'ny ankizy dia fehin-kibo miaraka amin'ny sehatra fifanakalozan-dresaka, izay ahafahanao mandefa sy mandray hafatra an-tariby amin'ireo mpikambana ao amin'ny fianakavianao ao amin'ny efitranonao.
Hitady karazam-pitiavana Disney ao anaty Flash
Ny iray amin'ireo zava-mahagaga momba ny fananganana Disney Cruise dia afaka mihaona karazam-pitiavana Disney ao anatinà toerana madio kokoa izay mety ho hitanao any amin'ny valan-javaboary.
Ny fampiharana navigator dia ahafantaranao hoe taiza ny endri-pitenenana tsirairay dia efa nomanina miaraka amin'ny mpaka sary ofisialy Disney. Afaka foana ny maka sary manokana, noho izany dia aza hadino ny fakantsarinao.
Aza manadino zavatra eo amin'ny Cruise Disney anao
Ny asa rehetra izay novonjena tamin'ny alàlan'ny fanindriana ny fonosana fo dia hovonjena ao anatin'ny fandaharam-potoana manokana. Ao amin'ny fefy? Mandehana ary tehirizo amin'ny fo izany. Raha manova ny sainao any aoriana ianao dia esory fotsiny ny fo ary dia hesorina amin'ny fandaharam-potoanao ilay asa.
Hahazo fampandrenesana 15 minitra mialoha ny hetsika ianao ka tsy hamela na inona na inona. Ary satria samy manana ny tian'ny tenany manokana ny voavonjy, dia afaka manao izay tiany ny tsirairay.
Manaova famandrihana amin'ny tadiny
Miangavy ny zanakao hankany amin'ny AquaDuck ve ny ankizy? Tsy mahatsiaro ny fomba hahatongavana any amin'ny Birao Service Guest Services? Ny fitadiavana ny lalanao manodidina ny sambo dia tsio-drivotra rehefa manana ny deckplans amin'ny rantsan-tànanao ianao.
Mialà sasatra eo amin'ny sakafo fanasana anao
Manontany tena ny amin'ny fisakafoanana ? Ny rindrambaiko Navigator dia ahafahanao mamihina tampoka eo amin'ny sakafo fisakafoana. Tsara be raha manana fahazarana eo amin'ny sakafo ianao, mihinana sakafo matsiro, na fialan-tsasatra lehibe.
Manaova fialan-tsasatra sy hafahafa
Ny marainan'ny andro fitsidihanao dia mety ho mahery vaika raha tsy voalamina ianao. Ny app ny Navigator dia manome ny fampahalalana mahatsikaiky rehetra momba ny andro fandravana, avy amin'ny toro-hevitra amin'ny toro-làlana ho an'ny antontan-taratasy ilaina sy ny safidy fitaterana an-tserasera.
Sakafo ao amin'ny Riviera
Fikarakarana sakafo sy fikarakarana sakafo ara-tsakafo Norvezianina
Safidy fisakafoanana any amin'ny Oasis-dranomasina Royal Caribbean
Holland America Line Nieuw Amsterdam - Bars ary lounges
Karnavaly Dream - Cabins and Suites
Hurtigruten MS Midnatsol - Cabins sy Suites Photo Gallery
Manao ahoana ny hasarobidin'ny memories?
Ny pasipaoron'ny toeram-ponenana ao Nassau ho an'ny mpifindra monina
AMC Fork sy Screen / Cinema Suites
Aiza no hijerena trano fialan-tsasatra ao Raleigh-Durham
Fiatrehana ny lohataona sy toby ao Oklahoma City
Andron'ny Maty Ao Meksika: Ny Torolalana Manonona
Zavatra mahagaga atao amin'ny ankizy any San Diego
Tanàna ngeza any Hawaii
Ny fomba hakana taxi ao New Orleans
Manatrika ny tranombakoka palitao Sultanate Malacca any Malezia
Hohokam Stadium amin'ny takelaka ho an'ny Oakland A's
Volana Krismasy Montreal: Safidio ny tenanao
Mankalaza ny Fetin'ny Reny any Gresy